[Sirculus:-] Emirate-ka Carabta oo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyadda Somalia ku amray iney doortaan Musharax beesha Daarood ? - iftineducation.com
[Sirculus:-] Emirate-ka Carabta oo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyadda Somalia ku amray iney doortaan Musharax beesha Daarood ?
aadan21 / November 1, 2016
iftineducation.com – Shirkii maalmahaan uga socday maamul goboleedyadda Somalia iyo Emirate-ka Carabta ayaa ku soo afjarmay in Mudane Cumar Cabdirashiid ay doortaan hogaamiyeyaashaas ,iyadoo la bixiyay deeq ,qeybna la ballanqaaday, sida ay Waagacusub u sheegeen ganacsatadii shirka abaabulkeeda lahaay iyo qaar ka mida hogaamiyeyaashii ka qeybgalay.
Emirate-ka Carabta oo diidan Dowladda Turkiga saameeynta ay ku leedahay Somalia ayaa si cad u soo bandhigtay siyaasadeed kadib markii in muddo ah hoos laga waday qorshahooda siyaasadeed ee hadda soo shaac baxay.
Madxweynaha maamul goboleedka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Adan oo aan si buuxda u diidin soo jeedinta Emirate-ka Carabta ayaa ku andacooday inuu isaga laftiisa yahay musharax balse uu Cumar Cabdirashiid gacan siin doono haddii isaga ku guuldareeysto rabitaankiisa Madaxweynenimadda Somalia.
Madaxweyneyaashaa Puntland iyo Jubaland Cabdiweli Gaas iyo Axmed Madoobe ayaa si buuxda u taageeray iney cod u raadiyaan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke iyagoo ballanqaaday iney ku shaqeeyn doonaan soo jeedinta Emirate-ka Carabta. waxaa kale oo ay ku dareen ballanqaadkooda iney u ololeeyn doonaan dowlad goboleedyadda xiriirka wanaagsan ka dhaxeeyo.
Ololahaan siyaasadeed oo lacag Malaayiin dollar ah lagu bixin doono waxaa lagu tilmaamay mid ka leexinaya Somalia iney rabitaankeeda wax ku doorato ,iyadoo horey dhaqan nuucaasa oo kale ay Dowladda Qatar ku keentay Madaxweynaha uu xilkiisa dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud, afar sano ka hor.
Madaxweyneyaasha HirShabelle iyo Galmudug Cabdikarim Guled iyo Cali Cabdullahi Cosoble ayaa Emirate-ka u sheegay ineysan ka soo horjeedin Cumar Cabdirashiid balse waxeey codsadeen in muuqaal ahaan lagu soo daro musharax Hawiye ah oo tartanka bilic u sameeya.
Dadka siyaasadda indha indheeya waxeey ku tilmaameen arrintaan mid qatar badan oo dib u soo nooleeyn karta khilaafyo siyaasadeed iyo ismaandhaaf beeleed oo rajo laga qabay in doorashadda Somalia ee sanadka 2016 looga bogsoodo.
ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa Waagacusub u sheegay inuu hoowshaan ku hoowlanaay lix bilood Safiirka Somalia u fadhiya Emirate-ka oo diblomaasiyadiisu aad u liidatay marka la fiiriyo maqaamka ay arrimaha Somalia ka taagan yihiin Emirate-ka Carabta.
Dadka Soomaaliyeed waxeey ganacsiga ugu balaaran la leeyihiin Emirate-ka Carabta.
Dhac loo geeystay maqaayad somali sanadkii hore lugu weeraray magaaladda Göteborg
Madaxweynaha oo xariga ka jaray Xaruntii Ciidamada Cirka ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)